BARADHADA "BLUE": SHARAX, SIFOOYINKA IYO SIFOOYINKA BEERAHA EE KALA DUWAN - BARADHADA
Doorashada baradho loogu talagalay beeritaanka dalka ama goobtu waa arrin aad u muhiim ah, sababtoo ah kala duwanaanta saxda ah waa fure u ah goosashada wanaagsan. Maanta waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo khudraddan ah, waxayna dhammaantood kala duwan yihiin midba midka kale ee dhadhankiisa, midabka, cabbirka iyo sifooyinka kale.
Kala duwan ee "Blue" waxa ay ka heshay caan ka mid ah bannaanka u badan ee ay fududahay in beerashada, bandhig qurux badan iyo dhadhan fiican ee digriiga. Maqaalkeena waxaan si fiican u baran doonaa baradhada "Blue", waanu baran doonaa sharaxaadda kala duwanaanshahan waxaanan awoodi doonaa inaan aragno inaan ku sawirno sawirka, sidoo kale waxaan ku falanqeyneynaa jawaab celinta beeralayda khibrad leh ee ku saabsan noocyadaas.
Noocyada kala duwan waxaa lagu dhalaaliyay jinsiyado Ruush ah iyo 1993-dii waxay gashay diiwaanka Gobolka ee Ruushka. Wuxuu leeyahay xidhiidh ilaa fasalada dhexe, sida muddada uu xilli sii kordhaya kala duwan 80 ilaa 100 maalmood ka dib muuqaalka caleemaha koowaad.
Beerta lagu beeray "Blue" ee beertaada, inta lagu guda jiro ubax, waxaad heli doontaa nooc ka mid ah sariirta qorraxda. Dad badan oo buluug ah, mararka qaarkood ubaxa cirridka-guduud ah ee foomka duurka ee xididkan, kaas oo go'aamiyay magaca noocyada kala duwan. Kalluunka naftoodu waxay gaareen celcelis ahaan celceliska, laakiin waxay yihiin warshad cagaaran oo leh caleemo cagaaran oo qani ah. Digriiga waxay u koraan xaddi weyn - miisaanka celceliska baradhada isbeddelka laga bilaabo 90 ilaa 150 g. Waxay leedahay qaab wareeg ah, midab beeleed iyo indho tiro yar. Maqaarka laftiisa waa dhuuban, oo leh mesh qurux badan dusha. Hilibka baradho waa caddaan, qallafsan, wuxuu leeyahay nacayb sarreeya iyo qalqal wanaagsan. Baradhada noocan oo kale ah waxay ku habboon tahay samaynta hawo la shiiday.
Digriiga baradho, oo weliba ah mid fiican, sidoo kale aad ayay u caafimaad qabtaa. Waxay ku jiraan wax badan oo ah potassium, kalsiyum, fosfooraska, magnesium iyo birta. Vitamiin sida C, B, B2, B6, B PP, D, K, E waxaa ka buuxa folic acid, carotene iyo acid acids: malic, oxalic, citric, qaxwaha, chlorogenic, iwm.
Ma taqaanaa? Barafka ugu qaalisan adduunka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay "La Bonnotte", oo ku koray jasiiradda Noirmoutier. Waa mid aad u fiican oo dhadhan fiican leh. Kiilo ah baradhada noocan oo kale ah waxay ku kacaysaa 500 oo euro.
Noocyada noocyada sii kordhaya
Baradhada "Blue" ee sifooyinka wanaagsan ee noocyada kala duwan helay helay badan oo ra'yi celin wanaagsan ee bannaanka u badan. Ka dib markii ay go'aansadeen in ay ku koraan sariirahooda, waxaa habboon in la ogaado sifooyinka kala duwan.
Meelaha loo dego waa in la furo, si fiican u iftiimaa oo qorraxdana u kululeeyaa. Maahan lagama maarmaan in la go'aamiyo aagaggaas ka hooseeya geedaha ama dhismaha. Dhulalka hoose waxay sidoo kale ku habboon yihiin, halkaasoo dhacdooyinka noocan oo kale ah sida sariiraha iyo istaaga biyaha ay yihiin kuwo soo noqnoqonaya.
U hubso inaad tixgeliso dalagga dalagga markaad beerto baradho. Fikradda isaga u noqon lahayd meelaha qajaarka, kaabajka, loodhadhka, iyo dhammaan dhirta qoryaha loo isticmaalo si ay u koraan. Ha beeran baradhada si aad u bedesho yaanyada iyo basbaaska.
Waa muhiim! Haddii meel gaar ah loo qoondeeyey baradhada beertaada oo aad korto khudraddan sanadkan ka dib, hubi inaad beerta beerta cagaarka cagaaran ka dib goosashada dalagga soo socda. Waa iniin khardal ah oo u wanaagsan tan.
Darajada "Blue" waxa ay ku kala duwan yihiin wax aan qabyo ahayn si ciid ah. Waxay si guul leh u korodhay dhammaan gobollada dalka waxayna leedahay awood aad u wanaagsan oo la qabsan karo xaalado kala duwan. Waxay si fiican u koraan on carrada iyo loamy carradu leh muuqaal dabacsan. Xaaladda ugu weyn ee biqilka wanaagsan waa heerkulka ciidda uusan ka yarayn 7 darajo Celsius. Baradho ayaa jecel ciidda bacrin ah waxayna noqon doontaa mid aad u mahadcelinaysa bacriminta macdanta ee sariiraha ka hor inta aan la beeri.
Ma taqaanaa? Fikradda ah baradho kuma koobna dalagga xididka, kaas oo si gaar ah ugu kora sariiraha dhulka. Dhirta baradhadu waxay ku koraan meel kasta oo ka mid ah kulaylka Koonfurta Ameerika. Waxay gaadhaan 15 mitir oo dherer ah waxayna soo saaraan miraha miro-madow iyo miro guduudan sanadka oo dhan.
Xeerarka beeritaanka noocyo of taranta Ruush
Wixii koritaanka habboon iyo goosashada caafimaad leh ee baradhada markaad beerto waxay ku haboon tahay raacitaanka xeerarka fudud.
Iyadoo lagu saleynayo marqaatiyaalka caleenta ah ee soo saaray bucshirta "Blue" ee noo, iyo jawaabcelinta ka yimid bannaanka u khibrad leh oo hore u beertay noocyo kala duwan, bilowga May waxaa loo arkaa inay tahay waqti ku habboon beeritaanka baradho dhulka. Haddii sanadka uu yahay mid diirran isla xilliga gu'ga, cimiladu waxay noqotaa mid gebi ahaan xagaaga, dhulgariir ayaa la samayn karaa dhowr toddobaad ka hor.
Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha in la daahiyo nidaamkan: isagoo maqan hal toddobaad ama laba, waxaa jira khatar sare ah in baradho si liidata loo kaydiyo, boqolkiiba nalalka istaarijka ah ee digriiga ayaa hoos u dhigi doona, ama si fudud ma noqon doono Gagaab. Intaa waxaa dheer, in qeyb ka mid ah baradhada goor dambe-loo beeray, xaddiga Nitrateh badan yahay.
Diyaarinta iyo beeritaanka baradhada
First of dhan, waa in la sheegay in ay jiraan laba siyaabood ah ee beerto this xidid: tareemada iyo tareemada. Kursiga ayaa waxaa isticmaala dadka deggan gobollada leh qoyaan badan, waxaana lagu beeray kabaha qalalan oo ku yaal tayada. Waxaa muhiim ah in aan la dhejin karaynin barandhada, si ay xididadu si xor ah u cunaan oo ay u sameeyaan miraha. Inta badan masaafada u dhexeysa safarada waxaa laga hayaa 70 illaa 90 cm, iyo inta u dhexeysa duurka - 30 cm. Sariiraha, baradhada waxaa sii qoto dheer qiyaastii 6 cm, halka fuushanaanta qoto dheer ay kor u kacayso ilaa 8 cm.
Ka hor inta aanad tuubada gelin godka, dhowr bakeer ah oo digada lagu daro ama compost lagu tuuro, waxaa la yareeyay ash, oo waxaad ku dari kartaa shimbir shimbir ah qaabka budada. Dhammaan isku dhafkan ayaa la isku daraa oo dhulka ku rusheeyaa dhowr mitir oo mitir ah. Ka dib markii taas, tuber waxaa lagu dhajiyey boodhka godka, oo la aasay, iyo ciidda waxaa lagu qiyaasaa qoto dheer. Haddii baradho beerto si aad u weyn - waa in la googooyaa.
Waa muhiim! Haddii jawiga aagga sii kordhaya aad u kulul, waxaad isticmaali kartaa oo aan digriiga uumi. Sidaa awgeed, qotodheerka qulqulka waxaa lagu kordhiyay 10-12 cm.
Sida loo daryeelo "Blue"
Ka dib markii digriiga ku yaal dhulka, waa inaad marka hore sugto caleemaha kowaad, ka dibna midhaha, isla markaaba daryeesha dhirtaada. Daryeelka noocyada kala duwan ee "Blue" waa heerka caadiga ah ee dalagyada noocyadaas ah.
Noocaani ma aha mid picky ah oo uma baahna waraabin badan. Waxaa si wanaagsan u kora xitaa iyada oo la'aanta qoyaan, sidaas darteed waxaad sifeyn kartaa sariirahaaga sida loo baahdo, oo ku salaysan xaaladaha ciidda iyo xaaladaha cimilada. Celcelis ahaan, tani waxay noqon doontaa dhowr jeer muddada koritaanka oo dhan.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin sii kordhaya kala duwanaanta baradho waa Rosara, Irbitsky, Gala, Adretta, Koroleva Anna, Luck, Kiwi.
Hilling joogto ah iyo dabacsanaantu waa lagama maarmaan u ah dalagga sida baradho. Nidaamyadani waxay kor u qaadaan socodka hawada iyo macdanta xididada, sidoo kale waxay kicin kartaa koritaanka xididada dheeraadka ah, taas oo si weyn u kordhisa heerka dhalada ee xididkan. Hilling buundada kaynta iyo loosening lakabka sare ee dhulka waa in la sameeyaa ka dib kasta waraabinta ama roobka, marka ciidda horay u nuugay oo dhan biyaha, laakiin ma lahayn waqti ay qalalaan. Kani waa ka hortagga dhismaha daloolka dhulka dushiisa ka dib markii la qoyan yahay.
Baradhadu aad ayay u jecel yihiin dhul bacrimiya, iyo noocyada kala duwan ee "Blue" waxay kuu noqon doonaan kuwo aad uugu mahadcelinaya quudinta waqtigeeda. Dhacdadan waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan iyadoo la isticmaalayo qalab kala duwan:
Xaashida shimbiraha. Ka hor inta aan la qalajinin sariiraha duurka u waraabiyey xal qalabkan biyo leh ee saamiga hal ilaa toban.
Korovyak. Sida bacriminta ah ee waraabka, waxay diyaariyaan bilowga soo socda: 1 litir oo digada cusub + 10 litir oo biyo ah. Ka hor intaan la isticmaalin, dareeraha waa in la sifeeyo.
Tinctures ee caleemo. Waayo, tan waxay ku habboon tahay cawska, kaas oo lagu shubay biyo iyo halsano. Ka dib markii, la badhaxay midabka cagaarka cagaaran, ceelasha la waraabiyey. Habkani wuxuu faa'iido u leeyahay duurka baradho ah bisha Juun, marka ay u baahan yihiin nitrogen.
Urea 10 litir oo biyo ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato 200 g oo ah HOL, 300 g of potassium monophosphate iyo 10 g of boric acid. Iyada oo xal this, waxaad quudin kartaa dhirta ka dib muuqaalka caleemaha ugu horeeya, iyo ka dibna laba toddobaad kasta ilaa ubax. Ka hor wakhtiga ugu horreeya waxaa lagama maarmaan ah in laba jeer loo kala badiyo biyaha.
Superphosphate. 100 g oo ah badeecada ayaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah, digaagana waxaa lagu buufiyaa laga bilaabo bilowgii ubax iyo ka hor goosashada.
TUSAALE +7. 10 litir oo biyo ah 2 g oo ah daroogada. Ku daawee qalabkan waa in la bilaabo marka caleen 4aad ay u muuqato in geedka. Saacadda - 2 asbuuc.
Cudurada iyo cayayaanka ee kala duwan
Cadaadiska cudurada badani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee baradhada "Blue". Waxay si fiican u muujinaysaa cudurrada sida kansarka, qolof, rhizoctoniosis, Alternaria, Y virus iyo noocyo badan oo kallana. Si kastaba ha noqotee, cimilada qoyan, noocyada noocaas ah waxay halis u tahay inay gaabis noqoto.
Haddii dhibaatadani dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso xalkan soo socda: 10 litir oo biyo ah, 150 g oo lime ah iyo 100 g oo ah sulfate copper. Ama 10 litir oo biyo ah 40 g oo ah daroogada "Hom". Waxaa habboon in la daaweeyo dhirta leh macnaheedu waa calaamadaha ugu horreeya ee infekshanka dhammaaday. Laakiin ugu dambeyn 20 maalmood ka hor baahida loo qabo in la goosto.
Marka chlorosis caleemo isticmaali xalka mulkiilaha manganese biyo (5-7 g halkii 10 litir). Calaamadaha caabuqa leh cudurkaan waxay noqon doonaan caleemo qoyan iyo midab madow mugdi ah ee nidaamka xididada dhirta.
Laga soo bilaabo cayayaan-baradho si fiican loo yaqaan - Colorado baradho baradho - Waxaan caawin doonaa daroogada sida "Taliyaha", "Iskra DE" iyo "Dilor". Daqiiqada gacanta ugu dambaysa waxay u qalantaa saddex goor. Dareemaha dhirta waxaa ka jira macne wanaagsan "Medvetoks". Waxaad ka iibsan kartaa daawooyinkan dukaanka khaaska ah waana inaad si taxadar leh u akhridaa tilmaamaha ka hor inta aadan isticmaalin.
Ka hortagga infekshanka leh noocyada kala duwan ee cayayaanka ayaa sariiraha si joogto ah u ciribtirma leh baradho, ka hortagga koritaanka cawska u dhow duurka. Cayayaanka yaryar waxa ay inta badan ku nool yihiin caws cagaaran.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada "Blue"
Waxaan ku taxluuqa dhammaan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada noocyada baradho "Blue".
Faa'iidooyinka ay ka midka yihiin:
Cadaadiska sare ee cudurada caadiga ah iyo fayraska.
Waxsoosaar sare (laga bilaabo boqol mitir oo laba jibbaaran, waxaad ka qaadan kartaa ilaa 1.5 tan oo baradho ah)
Awooda sare ee la qabsiga xaaladaha kobcinta kala duwan.
Qarsoonaan la'aanta ciidda. Doonista si ay u koraan ugana midhoowdo xittaa dhulka leh heerarka biyaha sare.
Nooc ganacsi beereed.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah suurtogalnimada formation of hollows iyo voids ee digriiga xilliyada qaarkood.
Beerta "Blue" waxay u qalantaa jacaylka beeraleyda badankooda, baradkoodu waa kala duwan yihiin sifooyinka wanaagsan, iyo dhammaan kuwa ku kora sariirahooda sanado badan, kuwa kale kugula taliya inay noqdaan kuwa leh dhadhan fiican, aan qabyo ahayn, si sahlan oo ay u koraan oo u daryeelaan khudaarta cagaaran iyo iyaga ku beeraan beerta.